गायक अमिर भोम्जनको नयाँ गित सार्वजनिक भएको छ । भिमफेदी गाइजको रोमान्टिक डान्सको भिडियोमा आएको गित उनको अहिले सम्मकै पहिलो रोमान्टिक गीत हो । दिनेश थपलियाको शब्द सिर्जना र बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको उक्त गीतमा अमिर भोम्जनले स्वर दिएको छ । 'माया भन्ने कुरा' अमिरको आफ्नै युट्युब च्यानल 'अमिर भोम्जन' मा राखिएको छ ।
'आमा' गीतबाट आफ्नो संगीतको यात्रा सुरु गरेको अमिरको 'हारेको छैन मन' बोलको गीत पनि युट्युवमा सार्वजनिक भैसकेको छ । उनको 'दैवले मलाई' , 'मलाई निन्द्रामा जिस्काउछ' , 'घुम्न आउँदा आउँदै' र 'मेरो दुखमा साथ दिने' , बोलको गीत छिट्टै नै आउने भोम्जनले बताए ।
उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नं २ खानीगाउँमा वि. सं. २०५६ फागुन २५ गते जन्मिएको अमिर जन्मजात नै शारीरिक रुपमा अशक्त भए पनि आफ्नो परिवारको साथ र सहयोगमा चित्रकला, साहित्य र संगीतको यात्रालाई अघि बढाइरहेको छ ।